i-vidREACH: Ipulatifomu Yevidiyo Ye-imeyili Yokucabanga Ngokucabanga | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 28, 2020 NgeSonto, ngoMashi 29, 2020 USean Gordon
Ukukhiqizwa kwabaholi kungumsebenzi omkhulu wamaqembu wokumaketha. Bagxile ekutholeni, ekubandakanyeni nasekuguquleni izithameli ezihlosiwe zibe ngamathemba angaba amakhasimende. Kubalulekile ukuthi ibhizinisi lenze isu lokumaketha elibhebhethekisa ukukhiqizwa kokuhola.
Ngokwalokho, ochwepheshe bezentengiso bahlala befuna izindlela ezintsha zokugqama, ikakhulukazi ezweni elihlale ligcwele ngokweqile. Abathengisi abaningi be-B2B baphendukela ku-imeyili, beyibuka njenge- isiteshi sokusabalalisa esisebenza kakhulu sokukhiqizwa kwesidingo. Ngenxa yokuthandwa kwayo, i-imeyili ingaba nzima kakhulu ukugqobhoza nokunakwa. Noma kunjalo, awukwazi ukungayinaki i-imeyili. Ngokusho kweRadicati Group, kunama-akhawunti we-imeyili angaphezu kwezigidigidi ezingama-6.69. Amaphrojekthi weStatista the inani labasebenzisi be-imeyili abasebenzayo izoshaya u-4.4 billion ngonyaka ka-2023.
Izinkampani zidinga indlela entsha yokufinyelela amathemba ngaphandle kokufinyelela kwe-imeyili kwendabuko. Ithemba ngalinye lihlukile, ngakho-ke ukuxhumana kwakho nabo kufanele kwenziwe ngendlela oyifisayo.
Ividiyo iyindlela enhle yamaqembu okuthengisa nawokumaketha ukuze enze ukufinyelela komuntu kube ngokwakho. Iba yingxenye ebalulekile yezokumaketha. Abathengi abayisikhombisa kwabangu-10 be-B2B babuka ividiyo ngesinye isikhathi ngenkathi kuthengwa. Ukungasho, cishe amaphesenti angama-80 we abathengi bakhetha ukubuka ividiyo kunokufunda ngomkhiqizo.
Ukufinyelela kwakho kwezokumaketha kungagqama ngokuthumela amathemba evidiyo eyenziwe ngezifiso echaza inani lesiphakamiso sakho ngendlela enobuciko futhi ehehayo. Ukusetshenziswa kwevidiyo kusiza ukwakha ukwethembana futhi kufundise amathemba. Ikhuthaza ubudlelwano bomuntu nomuntu namathemba ngenkathi kukhulisa ulwazi lwakho lomkhiqizo.
i-vidREACH iyi-imeyili yevidiyo nepulatifomu yokuzibandakanya yokuthengisa eyenza amakhasimende ukuthi afinyelele amathemba ngokuhlanganiswa kwevidiyo, i-imeyili kanye nemiyalezo ye-SMS. Ipulatifomu inikela ngevidiyo eyenziwe yaba ngeyakho kanye ne-imeyili ukuze konke ukuxhumana kube okomuntu siqu futhi kunikezwe ithemba ngalinye.
Kunezinto ezine ezinkulu kupulatifomu ye-vidREACH - ividiyo, ukuhamba komsebenzi, ukuhlanganiswa kanye ne-analytics.
Ividiyo - Ividiyo iyindlela yokufinyelela izithameli zakho lapho zikhona. Ngeplatifomu ye-vidREACH, ungaqopha ividiyo yakho, urekhode isikrini sakho, noma usebenzise izinsizakalo ezilawulwayo ukuze urekhodelwe ividiyo. i-vidREACH ikuvumela ukuthi uhambise amavidiyo athintekayo, enziwe waba ngewakho.
ukuqhutshwa komsebenzi - Ukuhamba komsebenzi kuvumela ithimba lakho ukuletha umyalezo ofanele ngesikhathi esifanele. Ngalesi sici, ungenza ngezifiso futhi uguqule ukuhola okuholayo, ukusebenzisana kokuthengisa, ukuxhumana kwamakhasimende okuphumelela kanye nezinqubo zokuqeqesha abasebenzi. Oxhumana nabo bahamba ngokuzenzakalela ngokuhamba komsebenzi okuhleliwe kuya ngokuthi basebenzisane kanjani nokufinyelela kwakho. Lokhu kugcina ukulandelela kungaguquguquki futhi kusesikhathini.
Ukuhlanganiswa - Kungukhiye ukuthi ividiyo yakho ikwazi ukusebenza namanye amathuluzi nezinkundla ozisebenzisayo, ikakhulukazi ukufinyelela. i-vidREACH ihlangana ngaphandle komthungo ne-Outlook ne-Gmail, kanye namapulatifomu athandwayo afana ne-Salesforce, Facebook, Microsoft ne-LinkedIn.
Ama-Analytics - Ukwazi ukuthi ukufinyelela kwakho nge-imeyili kwevidiyo kusebenza kanjani kubalulekile. i-vidREACH idlulela ngaphezu kokuchofoza kokuxhumanisa futhi inikeze izibalo ezithuthukile. Ungalinganisa umkhankaso wevidiyo nokusebenza kokuhamba komsebenzi futhi ubuke ukubikwa okwenziwe ngezifiso ngesikhathi sangempela. Ngala ma-analytics, ungalawula inqubo yakho yokufinyelela nokuzibandakanya kokuthengisa ngokususelwe kokusebenzayo nokungasebenzi.
Nazi izici ezimbalwa ezibalulekile i-vidREACH enikeza amaqembu okuthengisa nawokumaketha ukusiza ukwenza lula inqubo ye-imeyili yevidiyo:
Izifanekiso ze-imeyili - Ungakha izifanekiso ze-imeyili ezinemilayezo enangaphambi kokugunyazwa i-reps yakho engayithumela kumathemba ngokuchofoza inkinobho.
Ukuthwebula kwesikrini - Kusuka kungxenyekazi ye-vidREACH, ungarekhoda isikrini sakho bese uthumela amademo wangokwezifiso kumathemba akho.
Izaziso zesikhathi sangempela - Abasebenzisi bathola izaziso zesikhathi sangempela noma nini lapho othile esebenzisana ne-imeyili noma ividiyo abayithumelayo. Lokhu kusiza ekuqinisekiseni ukuthi uhlala phezulu kwezimpendulo futhi awulahlekelwa ngamathemba.
I-Teleprompter - Umbhalo ungasiza lapho urekhoda ividiyo. i-vidREACH inikeza i-teleprompter engaphakathi nohlelo ngakho-ke akudingeki ukuthi ubambe ngekhanda iskripthi noma ukukugcina ukulandela umkhondo nalokho ofuna ukukusho.
Ochwepheshe bezentengiso nezentengiso ezimbonini ezahlukahlukene bangasebenzisa i-vidREACH. Ukuma okusemqoka okuthole impumelelo kufaka phakathi ukungenisa izihambi, izindlu ezithengiswayo, ukumaketha, nokuzijabulisa. Ukusetshenziswa kwevidiyo kungakhuphula amazinga wokuvula nokuchofoza.
Abasebenzisi be-vidREACH babone ifayela le- Ukunyuka kwamaphesenti angama-232 kuma-email rates avulekile lapho usebenzisa ividiyo yokukhiqiza okuholayo kanye ne- Ukwanda ngamaphesenti angama-93.7 kwabaqashiwe ngamathemba ngenxa yesizukulwane sokuhola esiphumayo. Amakhasimende we-vidREACH asungule amavidiyo angama-433,000, athumela ama-imeyili angama-215,000 futhi abona izinga lokudlala ividiyo elingu-82%.
Uma ufuna ukugqama ebhokisini lokungenayo bese ubona ukweqa ekuchofozweni kwezixhumanisi ze-imeyili nemikhombandlela efanelekile, zama ukusebenzisa i- ipulatifomu ye-imeyili evidiyo kunqubo yakho yokufinyelela.
i-vidREACH iyi-imeyili yevidiyo eyenziwe yaba ngeyakho kanye nesikhulumi sokubandakanya ukuthengisa esisiza amabhizinisi ukuthi ahlanganyele izethameli zawo, alethe ukuhola okuningi futhi avale amadili amaningi. Ngenhloso yokusiza wonke amaqembu ukuthi afinyelele amandla awo aphelele, i-vidREACH inikeza amasu wokukhiqiza okugcwele ngokugcwele kumakhasimende afuna ukwandisa ukufinyelela kwawo ngaphezu kwezindlela zendabuko.
Tags: Ukulindelaukuzibandakanya kokuthengisaukuthengisa ukuhlanganai-imeyili yevidiyoipulatifomu ye-imeyili evidiyoi-vidreach
USean Gordon unerekhodi elibanzi lokuqasha, ukuqasha, ukuqeqesha nokuvula ithalente labantu. USean wasungula ivREACH.io ukuvuselela nokwenza ngezifiso ukuxhumana ngamandla wevidiyo. USean udale imigqa emisha yebhizinisi, wavuselela amasiko ezinkampani amile, futhi waqeqesha amakhulu ezisebenzi eseziqhubeke nokwenza izinto ezinhle.